अझै पनि जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ - आयो खबर
अझै पनि जनताका समस्या ज्यूँका त्यूँ
२०७७ आश्विन २६ प्रकाशित ०८:३०
काठमाडौं, झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारप्रति जनताले राखेका आशा, अपेक्षा विस्तारै वितृष्णामा परिणत हुन थालेका छन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेको छैन । सरकारले नयाँ दृष्टिकोण र नवीन योजना ल्याउन सकेको छैन । यो नै समस्या हो । जनताले बिगतका सरकार र अहिलेको सरकारमा कुनै भिन्नता पाउन सकेका छैनन् । अझै पनि जनताका समस्याहरु ज्यूँका त्युँ छन । ती समस्या समाधान गरेको खै ? राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा कुनै नयाँ दृष्टिकोण देख्न सकिएन । पुरानै शैली, व्यवाहार, सामन्ती सोच, बाहेक केहि देखिएन । यसरी लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाको बिकास हुन सक्दैन । नेता मोटाउने जनता दुव्लाउने अवस्था आयो । ब्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था उस्तै छ ।
अर्कोतिर सरकारले कोभिड नियन्त्रणका सवालमा गरेका काम पनि विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । सुशासन दिनुपर्ने सरकार नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु राम्रो होइन । देखिने गरी त्यस्तै भएको छ । हो , काम गर्दा कमजोरी पनि हुनसक्छ । कमजोरीलाई सच्याउने बाटो तर्फ लाग्नु पर्छ । कहाँ कसले भ्रष्टाचार गरेको छ ? कसले घुस खाएको छ ? त्यो बेला बेलामा अनुगमन गर्नु पर्छ । दोषी भेटिए कडा कारवाही गर्नु पर्छ । बालुवाटारको जग्गा काण्ड ढिसमिस भयो । कुनै कुरामा केही पनि भएन । त्यसकारण सुशासनको आशामा रहेका जनता विस्तारै विस्तारै आक्रोशित हुन थालेका छन् । यस्तै भइरह्यो भने भोलि यो मुलुक कसको हातमा पुग्ने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । ’cause नेपालमा आन्दोलन र परिवर्तन चाँडाचाँडो हुने गरेको इतिहास साक्षी छ । यो कुरा शासकले ख्याल गर्न जरुरी छ । शासकहरुको कार्यशैलीमा सुधार नआए जनता निराश हुँदै आक्रोशित र आन्दोलित हुन्छन्, जसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
प्रकाशित | २०७७ आश्विन २६ प्रकाशित ०८:३०
मुगुमा भाईरलले ज्यानै लिदाँ समेत उपचार प्रभावकारी भएन्
विद्यार्थीहरुलाई भटाभट सेक्स टोय पार्सल सित्तैमा